Meicet |China Meicet Inaliti yasimahla yeMesotherapy yobuhle kuMatshini weCollagen wePin weHydrPeel kunye neFactory
Uxinzelelo lweHandle yesitshizi:5kg/cm³-10kg/cm³
Ubungakanani bomatshini wokusingatha:49x44x60cm
Ubunzima boMashini womamkeli:15KGS
HydrPeel Mesotherapy Machine Intshayelelo
I-Meicet HydrPeel sisixhobo sobuhle se-osmotic esitsha, esingavaleliyo, esisebenza ngeendlela ezininzi.Usebenzisa itekhnoloji ye-TDA engenanaliti ye-pulse air wave, isisombululo sezondlo sinikezelwa ezantsi kwesikhumba, ukuze kuphunyezwe iziphumo ze-hydrating, whitening, moisturizing, ukunciphisa imibimbi, kunye ne-anti-oxidation.
10.2 ii-intshi zeTouch Screen
Iilwimi ezi-2- IsiNgesi, isiTshayina
Ukufikelela kubunzulu 0.2mm-5mm
Tshatisa ngeeMveliso ezahlukeneyo
IHydrPeel inokuhambelana neemveliso ezininzi zemisebenzi eyahlukeneyo, njengokuthambisa, ukwenza mhlophe, ukuchasana nokudumba kunye nokuguga kunye nokucoca.
Ukuchasana nokudumba, unyango lwe-Acne
Kwi-interface yokusebenza, indawo yokusebenza (ubuso okanye umzimba) inokukhethwa.Ubunzulu, iDose (Umlinganiselo) kunye neSpeed ​​of Spray handle inokulungiswa.Amaxesha okutshiza ashiyekileyo angabalwa.Kukho u-A, B no-C, iindlela ezintathu zokusebenza ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zokusebenza.
IHydrPeel ineendlela ezintathu zokusebenza: A, B, C.
Imo yimowudi ezenzekelayo, isitshizi siphakathi.
Imowudi ye-B yimowudi yokusebenza ngesandla: cofa kanye kwaye utshize kube kanye.
Imowudi ye-C yimo ezenzekelayo, isitshizi siyaqhubeka.
Isantya seSupersonic (450m/s) singena ngokukhawuleza.
Unyango olungasebenzisiyo.Musa ukuchukumisa ulusu ngokuthe ngqo ngexesha lonyango.
Izithako ezisebenzayo zicutshungulwa ngetekhnoloji ye-oksijini ephezulu yoxinzelelo, enye ngakwenye inyusa umxholo we-oksijini yeeseli, iphucula i-oxygenation, kwaye ngakwelinye icala ikhuthaza ukungena.
Ngaphambili: I-Meicet Professional ye-High-end ye-3D yoMzimba we-Scanner yoMzimba uHlalutya ukuBumba koMzimba kunye ne-Poture Visbody R Explorer nge-Turntable
umatshini mesotherapy ezintle
non-naliti umatshini mesotherapy
izixhobo ze-mesotherapy ezingasebenziyo
ulusu umatshini ubuhle